StrictlySlots.eu Tablet Mobile & အွန်လိုင်း | landline ကာစီနိုစူပါဆုကြေးငွေငွေတောင်းခံခြင်း | Phone ကိုဂိမ်းများ£££!
Oct 31, 2014 | အထူးပြောစရာမရှိ
landline ကာစီနိုငွေတောင်းခံလွှာ: လက်ကိုင်ဖုန်းသို့သျောလညျးကိုကျော်ခေါ်ဆောင်ပြီမဟုတ်ဒါကသက်သေပြ!
လူတစ်ချိန်ကဗီဒီယိုရေဒီယိုကြယ်ပွင့်ကိုသတ်မယ်လို့ကြောက်ရွံအများကြီးအတူတူပင်လမ်းအတွက်, သို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကစာတိုက်န်ဆောင်မှုတင်မယ်လို့, မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းလုံးဝခေတ် Ole ကောင်းသောမှကျော်ယူဘယ်တော့မှလိမ့်မည် ကြိုးဖုန်း ငွေတောင်းခံ.
သော်လည်းမျှတဖြစ်, မခွဲခြားဘဲစားသုံးသူအမှန်တကယ် / ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခံယူစေရန်၎င်းတို့၏ဖုန်းလိုင်းကိုသုံးခြင်းရှိမရှိ၏, သူတို့နေဆဲအင်တာနက်များအတွက်တက်ကြွစွာဖုန်းလိုင်းလိုအပ်ပါတယ်. နညျးလမျးမြားစှာရှိဘယ်, အကြားပြည်ထောင်စုစေသည်ကားအဘယ်သို့ BT အိမ်ဖုန်းဘီလ် နှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များထိုကဲ့သို့သောစုံလင်သောတစျခု.
အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံအထူးသ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှတဆင့်အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်အွန်လိုင်းလောင်းကစားနိူး၏တိုးမြှင့်နံပါတ်များကိုပစ်မှတ်ထားဖို့စတင်လာတဲ့အခါ (စမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet), ငွေပေးချေမှုများမှတဆင့် မိုဘိုင်းအကြွေးနဲ့ SMS ကိုလောင်းကစားရုံ features တွေ တစ်ဦးမရှိမဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုရာပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်လာခဲ့သည်. သို့သော်, တခါ၎င်းတို့၏နေအိမ်များ၏အဆုံးအမတွင်ဤတူညီသောကစားသမားမကြာခဏတစ်ဦးအပိုဆောင်းငွေပေးချေမှုစမ်းချောင်းကဆက်ပြောသည်ခံရဖို့ခဲ့ရည်ရွယ်သောသူတို့၏လူနေအိမ်ဘရော့ဘန်း / Wi-Fi ကိုအသုံးပြုသို့ပြောင်းရန်: အဆိုပါဖုန်းလိုင်းဘီလ်ပို့ကာစီနို.
ဘယ်လိုကာစီနိုအပ်နှံ landline အလုပ်ကနေတဆင့်တတ်?
ကြိုးဖုန်းလောင်းကစားရုံ option ကိုအားဖြင့်လစာမိုဘိုင်းအကြွေးနှင့်အတူ '' ကသိုက်အများကြီးအတူတူပင်လမ်းအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သောအခြားလုံခြုံငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်’ မ. ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့်ကနေရှေးခယျြဖို့ကစားသမားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်ရေးပေးသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ဿုံ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအကိုက်ညီဆုံးအရာတစျခုရွေးနိုင်သည်. LadyLucks ကာစီနို ဥပမာ, ကစားသမားပေးသည်6ကွဲပြားခြားနားသော Top-up options များ: မိုဘိုင်းဖုန်းကာစီနိုအားဖြင့်ပေးဆောင်, credit / Debit Card ကို, PayPal က, eWallets, Boku မိုဘိုင်းခြင်းဖြင့်ငွေပေးချေ, ကြိုးဖုန်းများမှတဆင့်နှင့်ကာစီနိုသိုက်. ဒါဟာကစားသမားသူတို့၏ '' အကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်မတှေ့ကလုံးဝနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး’ သိုက်နည်းလမ်း!
Awesome ကို LadyLucks အပေါ်ဖတ်ရန် £5အခမဲ့ကွိုဆိုအပိုဆု + £ 225 အပ်နှံပွဲစဉ် အထူးနှုန်းများနှင့်ဆုလာဘ်များ.
ဤအမှုအလုံးစုံ Payforit အဖြစ်လူသိများထူးခြားတဲ့ငွေပေးချေမှုနှင့်ငွေပေးငွေယူအစီအစဉ်၏အသုံးချနေသဖြင့်ဖြစ်ပျက်: ပိုက်ဆံ၏စီးဆင်းမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းညှိသောပိုက်ဆံစီးဆင်းမှုစနစ်က. ဖောက်သည်တစ်ဦးကစားတဲ့ရီးရဲလ်ပိုက်ဆံကစားရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသောအခါ, (ဥပမာ), သူ / သူမပေးဆောင် BT အဘယ်သူသည်ထို့နောက်မေးခွန်းအတွက်လောင်းကစားရုံမှငွေကြေးတန်ဖိုးကိုကျော်လွှဲပြောင်း.
မိုဘိုင်းဂိမ်းများ အခြားချုပ်နမူနာဖြစ်ပါသည်. BT ဘီလ်ကို အသုံးပြု. နိမ့်ဆုံးသိုက်ပမာဏကိုပဲ£ 1.50 ဖြစ်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲနဲ့အဖိုးအခကိုပြောင်းလဲနှင့်သုညအပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်နှင့်အတူ. ဒါကကစားသမား 2PM မှာဖုန်းလိုင်းကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးလောင်းကစားရုံသိုက်လုပ်နိုင်ကြောင်းကိုဆိုလို, Moobile ရဲ့အံ့ဖွယ်ပုံစံမိုဘိုင်းပေါက်ဂိမ်း '' ငွေသဲသောင်ပြင်ချက်ချင်း play’ အဖြစ်အနည်းငယ်သာ 1p အဖြစ် line ကနေ, နှင့်အဲ့ဒီနောက်သိပ်မကြာခင်မှာပဲ£ 6,000 သလောက်အနိုင်ရ!
ရ Moobile ရဲ့ဖုန်းကာစီနို App ကို Register နှင့် Download £5အခမဲ့ – အဘယ်သူမျှမအပ်ငွေ တောင်းဆိုနေတဲ့.
တစ်ဦးအပိုဘီလ်၏လုပ်ရတဲ့သင်ဟာယခုပင်လျှင်တစ်ဦးကို Mobile Phone ကိုရရှိပါသည် အကယ်. အဘယ်ကြောင့်?
ဒီပြီးသားမိုဘိုင်း sms ကိုငွေတောင်းခံအားဖြင့်ဆပ်ဖို့ကထို option ရှိသည်သောသူအများအပြားမိမိတို့ကိုယ်ကိုမေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်. ပထမဦးစွာ, PAYG မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်လူများအတွက်, ဒေတာကုန်ကျစရိတ်ကစားသမားအခမဲ့ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေကြတယ်, အထူးသဖြင့်လာသောအခါအတော်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာရှိနိုင်ပါသည်, ဒီတော့ကြိုးဖုန်းငွေတောင်းခံနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ထို option ကိုနေရာလေးကိုလာ. တစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ PocketWin ကာစီနို:
သူတို့မှတ်ပုံတင်တဲ့အခါအားလုံးအသစ်ကအဖွဲ့ဝင်များ£5အခမဲ့ရ
ထိုကဲ့သို့သော Blackjack နှင့်ကစားတဲ့အဖြစ် High-end လောင်းကစားရုံဂိမ်းအခမဲ့ Download လုပ်
ကစားသမား FaceBook ပြိုင်ပွဲနှင့်ဆုချီးမြှင့် Giveaway ရိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်
PocketWin ရဲ့အင်မတန်ထူးခြားဆန်းကြယ်အပေါ်အပြည့်အဝပုံပြင်ကိုဖတ်ပါ £5+ 100% သိုက်ပွဲစဉ် & ဂရိတ် Prize ကို Give-Away!
တစ်ဦး PAYG မိုဘိုင်းဖောက်သည်များအတွက်, အများဆုံးစွဲချက်အများကြီးမှလာမည်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ခိုင်မာတဲ့ High-end ဂိမ်းဒေါင်းလုပ်အကုန်အကျရှိနိုင်ပါသည်. ဒါကြောင့်ချိတ်ဆက်ရန်အများကြီးပိုကောင်းသဘာဝကျပါတယ် PocketWin အွန်လိုင်းကာစီနို ကြိုးဖုန်းကိုအင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် download, ကုန်ကျစရိတ်ယေဘုယျအားဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်သကဲ့သို့ (နှင့်ပိုမြန်) မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူထက်.
ဒုတိယအ, အွန်လိုင်းကာစီနိုသိုက်နှင့်ဆုတ်ခွာပမာဏလက်ခံရရှိသောလစဉ်ဥပဒေကြမ်းများအပေါ် itemized နေကြတယ်. ဒီင့်လင်းမြင်သာဘို့ကြီးသောသတင်းဖြစ်သော်လည်း, ကုမ္ပဏီရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြီးကစားသမားချင်မပြုစေခြင်းငှါ Vegas မှမိုဘိုင်းကာစီနို ရုံးရဲ့ငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၌ထလျှိုလျှိုပေါ်ပေါက်စွဲချက်!
သင်တစ်ဦးရနိုင်ပုံကိုထွက်ရှာတွေ့ချင် £ 20 ရည်ညွှန်းကိုးကား-A-မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအပိုဆု ဂတ်စ်ကိုမိုဘိုင်းမှာ? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
ဒီလရဲ့ Featured ကာစီနို: TopSlotSite.com
တသမတ်တည်းအားကစားပြိုင်ပွဲအပေါ်ထိပ်မှထွက်လာ, အခမဲ့ကာစီနိုဆုကြေးငွေ, ရီးရဲလ်ငွေပေးချေမှုနှင့် VIP ဆုလာဘ်များ
အွန်လိုင်း 3D ဂိမ်းများ၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု, HD ကိုကစားတဲ့, multi-Hand Blackjack & ကာစီနိုဂိမ်းများ Live! အခမဲ့အတွက် Daily သတင်းစာပရိုမိုးရှင်းနှင့်တရာ£££ ပိုက်ဆံ Won မှုကိုခံရဖို့!!
ကြိုးဖုန်းများမှတဆင့်စာရင်းနှင့်အတူစတင်: လွယ်ကူအဖြစ် 1-2-နှိပ်ပါအဖြစ်
သင်ဤသည်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်နှင့်မည်သည့်ရှုပ်ထွေးသောခြေလှမ်းများသို့မဟုတ်စိစစ်အတည်ပြုခြေလှမ်းများမလိုအပ်ပါဘူးသင်သိရဖို့ပီတိအံ့သြသွားပါလိမ့်မယ်. မှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်နှင့်သင်တစ်ဦး BT အသုံးပြုသူသောအခါဤဝတ်ကိုသက်ဝင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ် no. အရာအားလုံးကောင်းစွာရှင်းပြပြီးအသေးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျ Poker landline ငွေတောင်းခံသုံးပြီးအမှန်တကယ်ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲရန်လုပ်ရှာနေဥပမာဆိုရမည်, သင်ပြုရန်ရှိသည်ချင်ပါတယ်အားလုံးဖြစ်ပါတယ်:
ထို option ကို "BT landline အားဖြင့်အပ်ငွေ" ကိုရွေးချယ်ပါနဲ့သတိပေးခံရတဲ့အခါသင့်ရဲ့ landline number ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်.
အလောင်းကစားရုံ SMSes သင်တစ်ဦးအရေအတွက်ကိုသင်အရေအတွက်ဖုန်းခေါ်ရန်ရှိသည်မည်သည့်အချိန်တွင်.
သင့်ရဲ့လောင်းကစားရုံအကောင့်မှငွေကိုတပ်အရောင်းအဝယ်အကြောင်းကို automated စကားသံကို system ကိုအတည်ပြုခြင်း, သောနောက်မှသင်သည်ဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ကစားစတင်နိုင်ပါသည်
တခါတရံအမှန်တကယ်သင့်ရဲ့လောင်းကစားရုံအကောင့်ဖွင့်ပြသရန်လွှဲပြောင်းငွေမိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်. ဤအမှုကိုပြုသောသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်စိတ်ချစွာကြွင်းသောအရာဖြစ်နိုင်ပြီးပမာဏကိုလရဲ့အဆုံးမှာသင့်ရဲ့ BT landline ဥပဒေကြမ်းအပေါ်တရားစွဲဆိုခံရလိမျ့မညျအဖြစ်ကစားစတင်.
တင်းကြပ်စွာ slot’ ထိပ်တန်းဗြိတိန် landline ငွေတောင်းခံလွှာကာစီနိုဂိမ်း:
ဖောက်သည်ကြိုးဖုန်းငွေတောင်းခံလောင်းကစားရုံ option ကိုဆက်ကပ်ကြောင်းအတော်လေးအနည်းငယ်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံရှိပါတယ်. သာအနည်းငယ်ကဒီမှာ featured လျက်ရှိသည်ပေမယ့်, ALL of the online casinos on Strictly Slots are worth checking out as they always provide enthusiastic gamers with exciting and amazing betting experience.
This self proclaimed ‘King of Mobile Casino Games’ ကစားသမားတွေလကိုကတိပေးထား, တစ်ခုနှင့်တစ်ခုလုံးကိုကတော့ galaxy ကယ်တင်တတ်၏! ဖြစ်တန်ရာကိန်း Games က Powered, မသာသူတို့ရဲ့ဂိမ်းကျွမ်းကျင်စွာပတ်ပြီ, ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း Apple နှင့် Android ကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက် optimized င်, အဖြစ်ကိုကောင်းစွာရဆုံးအခြားစမတ်ဖုန်းများနှင့် tablet ကိုထုတ်ကုန်အဖြစ်.
ပို 20 ကွဲပြားခြားနားတဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်း
HD ကို slot: ရုံ 1p နှုန်းလိုင်းနှင့်ချီကစားရန်စွမ်းရည်မှစတင်ကာကစားနည်း 100 တစ်ချိန်တည်းမှာလိုင်း!
multi-လက် Blackjack: ကစား3တကယ်ကုန်သည်ရိုက်နှက်၏လေးသာမှုတိုးမြှင့်ဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာလက်ကို
ကြှနျုပျတို့မှာအတိအကျ slot ကတကယ်စာချုပ်တံဆိပ်ခတ်ထားသောဆုကြေးငွေရဲ့သိသောကြောင့်, ကြွင်းသောအရာသငျသညျ Fruity ရှငျဘုရငျမှာအချည်းနှီးချင်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ချပါ: မသာသင်တစ်ဦးအခမဲ့လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည် £5မရှိသိုက်ဆိုင်းအပ်ဆုကြေးငွေ, ဒါပေမယ့်လည်း£ 225 သင်ပထမဦးဆုံးပေါ်ငွေသားပွဲစဉ်အထိ3သိုက်. ရည်ညွှန်းကိုးကား-a-မိတျဆှေအပိုဆုကြေးငွေ, အခမဲ့ပရိုမိုကုဒ်, andaVIP Clubajustataste of the treats to come.
Winneroo အားကစားပြိုင်ပွဲ ဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းမှုအတွက်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရ. မာယာ Moolah တူဂိမ်းရှိပါတယ် slots, စစ်ပွဲဇုန်နှင့်များစွာသောပိုဂိမ်းရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထားအကြားအလွန်လူကြိုက်များ. သူတို့ကအစအလုံးစုံဂိမ်းအတှေ့အကွုံတစ်ကယ့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာတစျခုသောမြတ်သောမိုဘိုင်း optimization နှင့်အတူကြီးမြတ်ဆုကြေးငွေဆက်ကပ်. စားပွဲပေါ်မှာဂိမ်းရှိပါတယ်, ဘင်ဂိုကစားအဖြစ်အကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များဒီတစ်ခုလုပ်ရာများစွာသောအခြားထူးခြားသောဂိမ်း. မိုဘိုင်း platform ပေါ်တွင်မရရှိနိုင်, ဒီအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအံ့သြဖွယ်ကမ်းလှမ်း £€ 10 ကြိုဆိုဆုကြေးငွေ အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သိုက်ပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေအတွက်£ 235 အထိ.
Winneroo Join နှင့် FaceBook ပေါ်သူတို့ကို Follow, ဂရိတ်£££ Prize ကိုများအတွက် Google+ မှာနှင့် Twitter Give-Away!
Winneroo ပတ်သက်. အကောင်းဆုံး feature ကိုကအဆင်ပြေပြေနဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူနေသောမြတ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားမိုဘိုင်း sms ကိုငွေတောင်းခံမှတဆင့်ငွေပေးချေမှုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပဲ£ 1.50 မှ BT landline အားဖြင့်ငွေပေးချေမှုပါဝင်
တကယ်အကြိုးပွုခံစားရသောဤ site ကိုအကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်…ကြင်နာတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့လယ်အပေါ်ရေခဲမုန့်ဘို့အထွက်နှင့်ကမ်းခြေအပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်းတူ, ဒါမှမဟုတ် Promenade အပေါ်တစ်ဦးလမ်းလျှောက်ပြောနေတာကိုမြင်ကွင်းများအားဖြင့်သွားကြည့်ဖို့. ရန်ရှင်းနေသည်မှာနီးကပ်2သန်းအခြားလူများအတူတူခံစားရ – သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်း LadyLucks စိတ်ကူးဆုကြေးငွေအရာနှင့်ကြီးစွာသောအဖွဲ့ဝင်အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့လုပ်ဖို့ကပိုရှိပါတယ်?
£5ဘယ်သူမျှမကသိုက်ကာစီနိုအပိုဆု – အဘယ်သူမျှမသိုက်လိုအပ်
ပထမဦးဆုံးပေါ်ငွေသားပွဲစဉ်ဆုကြေးငွေအတွက်£ 500 အထိ3သိုက်
300 ဆုရရှိသူ – 100 နေ့ရက်များမြှင့်တင်ရေး
ပရိုမိုးရှင်း Back ကို Cash
-a-မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းရည်ညွှန်းကိုးကားနှင့်တစ်ဦးကိုရယူပါ £ 20 အပိုဆု – ဘယ်လိုအထဲက Find
အခြားဖုန်းလိုင်းသိုက်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်ဝသကဲ့သို့, Top-up အကောင့်မှနိမ့်ဆုံးပမာဏကိုပဲ£ 1.50 ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ပိုက်ဆံအဘို့ကြီးသောတန်ဖိုးကိုင်လျှင်ဒါသငျသညျအပြီးနေ, သငျသညျဆက်ဆက်ညာဘက်အရပ်မှလာမယ့်!
အထက်ပါစာရင်းတွင်တစ်ဦးကစားတဲ့အတွက်ရှာဖွေနေဘယ်သို့သောကစားသမားတစ်ဦးပြည့်စုံသောစိတ်ကူးပေးသည်, Blackjack, Poker, နှင့် BT ကြိုးဖုန်းများက slots သိုက် are likely to find. အတိအကျ slot အပေါ် featured ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူကစားရသောအခါပေးစေလိုပါတယ်လည်းအဘယျအကိုမျှော်လင့်ရန်. သူကပြောပါတယ်, အမှုအရာအဖြစ်ကျယ်ကျယ်တတ်နိုင်သမျှဖော်ပြခဲ့ခြင်းနှင့်သရုပ်ဖော်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သာအစဉ်အဆက်ကယ့်အထဲကရှာတွေ့မှတလမ်းတည်းရှိရလိမ့်မည်, နှင့်ကြိုးစားရန်ယ် BT ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အထွက်ဖုန်းကိုငွေတောင်းခံဂိမ်း!
အဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့အပြည့်အအပေါ်ကစာရင်းဖြစ်ပါတယ်. ကြိုးဖုန်းငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာမှတဆင့်လောင်းကစားရုံသိုက်လွယ်ကူချောမွေ့သောအခြားကာစီနိုလောင်းကစားရုံပါဝင် အကြှနျုပျ၏ဘင်ဂိုကစားထိ, MadAboutSlots မိုဘိုင်း, လည်းပဲ နန်းတော်မိုဘိုင်းကာစီနိုလည်.
ထိုအကြွေး၏လျှို့ဝှက်ချက်ဘဏ္ဍာရေးအသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို၏အန္တရာယ်နှင့်ငွေထုတ်အဖြစ်တစ်ခုလုံးအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်လုံခြုံငွေပေးချေမှုကိုအောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းတော်မူပြီရာ BT landline မှတဆင့်ငွေပေးချေမှုလက်ခံစတင်ပြီးသောများစွာသောအခြားနာမည်ကျော်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံပံ့ပိုးပေးရှိပါတယ်အဖြစ်ဒါကပြီးပြည့်စုံသောစာရင်းမဟုတ်ပါဘူး ကတ်များရှိမရှိတော့သည်. တစျလုပျဖို့လိုအပျအားလုံးသည်တစ်ဦး landline အရေအတွက်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပြီးအတည်ပြုပြီးပြည့်စုံသည်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုအောင်စတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
landline လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုစူပါအစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်, သူတို့ကြောင့်သူတို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာမည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲပြီးစီးခံရဖို့ခွင့်ပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုမှကစားသမားများအကြားရေပန်းစားမှုရှိရရှိမှုနှင့်လုံးဝလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာခဲ့ကြ. အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားများ၏အရေအတွက်သည်လာမည့်နှစ်များတွင်ထပ်မံမြင့်တက်လာရန်မျှော်လင့်မှုနှင့်အတူ, လုံခြုံရေးနှင့်အဆင်ပြေတိုင်းလူတစ်ဦးသည်မိမိစွန့်ပစ်ခြင်းမှာရှိသည်ဖို့ likes ကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်သကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်၏ဤအမျိုးအစား ပို. ပင်လူကြိုက်များရသွား. landline ငွေပေးချေမှု option ကိုအတိအကျကြောင်းကမ်းလှမ်း.
တစ်ဦးကအနည်းငယ်သာ '' landline ငွေတောင်းခံလွှာ Etiquette’ ကိုအောကျမေ့ဖို့အချက်များ!
BT ဖုန်းလိုင်းအားဖြင့်ငွေပေးချေ များသောအားဖြင့်ဖုန်းကိုအစီအစဉ်အားဖြင့်မိုဘိုင်းလစာထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်ကြာနှင့်သင့်လောင်းကစားရုံအကောင့်ထဲမှာပေါ်လာဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာနိုင်, သငျသညျစိတျထဲမှာကိုခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်တစ်ခုခုသောဖြစ်ပါသည်. € 30 ကိုယူရို၏အမြင့်ဆုံးမှသာတစ်ကြိမ်လွှဲပြောင်းနိုင် Payforit အားဖြင့်အရပ်သို့သွင်းထားပြီတဲ့ကန့်သတ်လည်းရှိပါသည်. သငျသညျဥပဒေကြမ်းအခွန်ထမ်းမဟုတ်လျှင်လည်းသတိရ, သငျသညျသူ / သူမ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသေချာစေရန်. အကယ်. မ, ဒီဆိုင်းငံ့သို့မဟုတ်အရည်အချင်းပျက်ယွင်းခံသင့်အကောင့်မှဦးဆောင်စေခြင်းငှါ,…
Moobile ဂိမ်းများမှအပိုဆုငွေအတွက်£ 225 Get – Moo! ££
ဒါကြောင့်သင်အိမ်မှာထိုင်လျက်နေလာမယ့်အချိန်မြို့ပေါ်မှာထွက်သွားနှင့်အနောက်နိုင်ငံများအဆုံးအတွက်လန်ဒန်ကာစီနိုမှာအချို့သောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလောင်းကစားရုံအရေးယူမှုထွက်စစျဆေးဖို့ရှိမရှိအံ့သြ, သငျသညျအိမျမှာတူညီတဲ့စိတျလှုပျရှားစရာရှိသည်နိုင်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့! အားလုံးတက်ဝတ်ဆင်နှင့်တန်ဖိုးရှိသောအချိန်ကိုဖြုန်း-and တောင်မြောက်ခရီးသွားလာတဲ့ထက်အများကြီးပိုအဆင်ပြေသင့်ရဲ့ဆိုဖာကနေကစားသည်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသိသိသာသာပိုပြီးကုန်ကျထိရောက်သောင်! အခမဲ့လှည့်ဖျား, gratis ဆုကြေးငွေ, Tantalising ပရိုမိုးရှင်း, နှင့် Fantastic သစ္စာရှိမှုဆုလာဘ်တိုက်ယူဘို့ရှိသမျှကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်ကြ၏, သငျတို့သအနည်းငယ်ငွေသားအဘို့ငွေရှာပေးနေရင်တောင်, BT landline ကာစီနို ငွေတောင်းခံသငျသညျယခုကစားရန်ခွင့်ပြု, နောက်ပိုင်းတွင်ပေးဆောင်. မညျသို့ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်?!
ဖုန်းဘီလ်ကာစီနိုဂိမ်း SMS ကိုအားဖြင့်ကစားတဲ့ Deposit | ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ!